Ngo Tunisia, kukhona lenqwaba ehhotela izindawo ukuthola izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba, omunye okuyinto ehhotela elithokomele lesimanje ngokuthi ClubHotel Riu Bellevue Ipaki 4 *. Izibuyekezo lokhu eziyinkimbinkimbi ezifakazela ukuthandwa kwakhe phakathi izivakashi Russian. Tunisia, isimiso, ngokuthi resort Russian ukuze lungeneke nemibandela esihle sokuzilibazisa yayo.
Ihhotela ClubHotel Riu Bellevue Ipaki 4 * sise ibanga amakhilomitha 3 kusukela Port El Kantaoui futhi amakhilomitha 14 kusuka edolobheni elidume Sousse. Ibanga sezindiza wendawo imayelana 20 km.
Eduze Ihhotela kuyinto Chic yezitolo usayizi ehloniphekayo, lapho olungenziwa uthenge konke okudingayo. Futhi, etholakala eduze miniature yezitolo emadokodweni, futhi saqasha ukudluliswa ngenxa ehhotela, ungakwazi kalula ukuyothenga. A Shuttle ngeke ngaphandle kobudisi ukuze uthole emasimini lapho bonke beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni nethuba ukudlala igalofu.
Le ndawo emaphakathi ezisemadolobheni itholakala at ibanga 10 km ClubHotel Riu Bellevue Ipaki 4 * (Tunisia). Eduze kukhona 3 zezindiza ezinkulu: Monastirsky, Tunisian futhi Enfidsky. Ngaphambi Tunis sezindiza umgwaqo 145 amakhilomitha Monastirskogo - amakhilomitha 28, futhi Enfidskogo - 40 amakhilomitha. Ihhotela lakhiwa ngo-1994, kanti owokugcina uyoba ngo umsebenzi wokuvuselela izakhiwo ezinkulu kwenziwa ngo-2006.
Lesi sakhiwo kuhlanganisa ezine izibuya. I amakamelo ehhotela ngesicelo zingafakwa i Embhedeni owenezelwe ngoba ingane encane. ukuzijabulisa Wezingane is kwahambisana by animations okuthakazelisayo kunothile imidlalo nemincintiswano, futhi club yezingane ngumkhawulo kweminyaka emibili nengu-4 kuya kwezingu-12. Lapho efika endaweni yokulala, bafike bazinza leli hhotela emangalisayo, akekho ongasisebenzisa bahlala banganandaba.
Ngalinye igumbi ClubHotel Riu Bellevue Ipaki 4 * (Tunis, Sousse) ihlangana zonke izindinganiso yesimanje yokungenisa izihambi. I amakamelo balcony, ukulawula isimo sezulu, amathelevishini amafriji, izindlu zangasese kanye shower hairdryers.
Kukhanseliwe efulethini izingubo njalo, yokwamukela izivakashi abasebenza ubusuku nemini, futhi wireless ngesivinini Inthanethi ingasetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi.
Nethezeka ku amakhasimende yehhotela ezihlukahlukene futhi kuhambisana nanoma yimuphi izintandokazi. Kukhona indawo umdlalo we tennis, kanye ebaleni lokudlala i-aerobics namachibi ongaphandle nge Jacuzzi kanye evuthayo, futhi ebaleni lokudlala yezingane egcekeni, futhi club yezingane okwenzeka tinhlobo letehlukene imisebenzi yokuzilibazisa ngezinga elingakanani ukuze izivakashi abasebasha.
Uma ufuna, ungakwazi ukuchitha isikhathi fun egibele ihhashi. Ukuze abesifazane inikeza ukubhucungwa kuzo zonke izinhlobo ezihlukile, Ubuye salon izinwele, lapho ungakwazi ukushintsha kalula nje ukubukeka ngale ukuqashelwa.
I-sauna zehhotela inkonzo ethandwa kakhulu, inkonzo massage, umusi okugeza kanye Jacuzzi. Leli chibi has abadala nje kuphela kodwa futhi izingane, lapho isici esiyinhloko kanye inzuzo ukujula ezincane, okuyinto ivumela ukuziveza Kiddies ukubhukuda, futhi abazali musa nomuzwa wokuthi le nto, wesaba kakhulu ngenxa yokuthi umntwana ozithandayo ungase usigwinye amanzi.
Ebhishi ehhotela-siqu kungenzeka ukuqasha amanzi ezemidlalo ebhishi izihlalo, omatilasi kanye nezinye zikagesi ukuze bethamele ilanga iyatholakala ukuba isetshenziswe mahhala.
Ibhulakufesi emananini. Imikhiqizo zihlale fresh izivakashi njalo ekuseni nge "lezitsha". Kukhona futhi nezithelo wokudla, futhi inyama kanye nenhlanzi, futhi yogurt, kanye nokunye okuningi. Kukhona Amabha eziningana cocktail neziphuzo ezibandayo, futhi kwelinye libhala kokuhlwa Ilungiselela inyama nemifino okugazingiwe eyosiwe.
Ngamunye yokudlela izivakashi abasha sihlinzekela esihlalweni okusezingeni eliphezulu. Ukuze izingane ukudla uzilungiselele iresiphi ngcono kungekho extra ukunambitheka enhancers, amakha nezinye izithasiselo chemical. Ukudla neziphuzo athengwe ku-bar, avunyelwe udlule.
Labo babe lucky ngokwanele ukuba uchithe amaholidi abo e Tunisia, kungase ukuchaza kangcono ehhotela ClubHotel Riu Bellevue Park.
Esikhumulweni sezindiza, izivakashi ezifudumele ibhasi eliphuma round izivakashi ku amahhotela. Complex hotel ClubHotel Riu Bellevue Ipaki ukuya imizuzu 40, inqobo nje uma ibhasi ubiza wonke amahhotela endleleni. Ngemoto ungafinyelela ngemizuzu engu-20.
Izivakashi kuyakhexisa abaphathi enobungane.
Ihhotela is banzi nge esesimweni esihle futhi ukhululekile kakhulu. Ukuthola ngqo ngaphakathi ehholo umoya ngokushesha uzizwe umbala kazwelonke.
Inombolo ikoloni ngokushesha okukhulu. I Izindawo isivakashi ngasinye ukugqoka isongo. Esitezi ehhotela kusuka 6am ikhefi, lapho ungakwazi ukujabulela ngokugcwele ibhulakufesi. Ukugunda kakhulu uma ukufika ekuseni noma ukuvakasha.
On endaweni landscaped ezikhulayo exotic izihlahla, izimbali nezihlahla. Abasebenzi uqaphe nokuhlanzeka.
Amazwana isibalo amakamelo
Ngokuvamile ngesikhathi yokubhuka double ezindlini. Ezinye amakamelo uhlobo efanayo has ukubukwa phezu epaki, kuyilapho abanye umbono ulwandle. Izivakashi belulekwa ukuba ukhethe lokuqala, kusukela ohlangothini yasogwini lolwandle kuba umsindo kakhulu. Kusihlwa, zikhona ema-disco kanye izithombe izinhlelo.
Amakamelo ngokwabo libanzi futhi egqamile. Ngaphezu evrokrovati omkhulu, kukhona Embhedeni owenezelwe ngesimo embhedeni usofa. Futhi egumbini has a ivulekile ikhabethe, isibuko, air conditioning, ithelevishini. Ukufinyelela i-Inthanethi etholakalayo imali eyengeziwe, kodwa isignali ibuthakathaka. Phakathi amaphutha izivakashi Baveza eminye amaphutha yangasese kanye nezindlu zangasese.
Izivakashi Sisikisela ukuthatha amandla i "zonke okufakayo". Likhefi kusukela ngo-6 ekuseni wakhonza i ibhulakufesi ekuseni. yokudlela main Ihhotela sika ungathola ibhulakufesi, kodwa kusuka 7,30 kuya 10.00. Dinner, izivakashi eyinkimbinkimbi eduze ibha beach endaweni evulekile kusukela 12.00 kuya 15.00. Ukudla kakhulu, futhi lonke ehlukahlukene kanye esihlwabusayo. Ububanzi has izithelo njalo ezivuthiwe. Elimnandi - ice cream uphudingi. Njalo isivakashi uzothola ngokwabo okudliwayo futhi ngokuqinisekile ngeke alambe. Zonke iziphuzo ngaphandle imimoya, itholakala mahhala. Utshwala ikhishwa ngesikhathi bar. Ngaphezu ukudla main, Ungadla ayatholakala ngesimo pancake futhi sandwich.
Dinner wakhonza kumathebula e yokudlela main. Esikhathini ngiqala ukuyobona umphathi yokudlela elungisa etafuleni ngoba inombolo ngayinye. Izimenywa zingabelana adle kusukela 18,30 kuya 19,45 nokusuka 20,15 kuya 21,30. Ukudla lighter ngaphansi ezihlukahlukene kuka emini, kodwa izinga isezingeni ukuphakama izitsha.
Abasebenzi ehhotela anobungane futhi esheshayo ukubhekana nanoma yisiphi isicelo ikhasimende, lazama ukujabulisa. Ethonya ngukutsi zidlulile esikoleni yobuntu. Ukuze ehhotela izivakashi ziphathwa sikhexe futhi ngisho nesithakazelo impilo kanye nemizwelo. Zonke ukungaqondi kahle ixazululwe ngokushesha kakhulu. Abasebenzi akakhulumi isiRashiya, kodwa okhuluma isiNgisi ephelele.
Izinga lenkonzo ehhotela ClubHotel Riu Bellevue Park (Tunisia) njalo ukugadwa. Kwaze kweqa ngesikhathi sedina, njalo isivakashi kumele ugcwalise lemibuzo lapho uveza bona zonke evumelana naye futhi lokho siyaphela.
Amagumbi bahlanza nsuku zonke, ithiphu izinga yokuhlanza ayiphazamiseki. Izintombi zasemizini uqale ukusebenza kuphela ukungabi khona izivakashi.
Umoya Wokungenisa Izihambi iziqondiso kuthanda imininingwane ukubona indawo izinkambo, kuyilapho nawe ungalushayi ephoqelela lutho. Nikeza amakhadi nge ezikhangayo zendawo okhetheke khulu.
endaweni Beach ligcwele sun bed zikhona njalo izindawo khulula. Iya ebhishi bavame abahwebi awayiphazamisi, abanikezela ngezimpahla ahlukahlukene. Kodwa abasebenzi lolwandle, ukunakekela ukuphumula ukhululekile izivakashi ehhotela, abadayisi eziwuhlupho futhi umane baxoshwa.
Ulwandle engahlanzekile kakhulu. Amanzi esinamafu futhi inuka embi ngenxa ulwelwe imfucumfucu amancane. Kodwa ngemva kokuvuna ogwini ukubhukuda olwandle uyintokozo. Ngezinye izikhathi ungase ukuthole jellyfish. Zingase ukuluma ngisho. Kodwa abasebenzi ehhotela ngokushesha unikele usizo lokuqala. Beach kungokwalabo ehhotela. Zonke izikhungo atholakala mahhala.
Abenzi be-animation uzame ukubungaza izivakashi usuku lonke. Emini imincintiswano ehlukahlukene, ukudansa, Ukuvivinya umzimba ngendlela. Kusihlwa libe i-disco. Ikakhulukazi fastidious ungaya kuma-nightclub eliseduze, lapho e Sousse omningi. Ihhotela Public bahlanganisa ikakhulu abantu umndeni kanye nabahola impesheni, ngakho ke abantu abasebasha bayakwazi be bored lapha.
Amaholide e Tunisia uvame ukuhambisana yezitolo. Amanani e ezitolo zendawo kanye nezimakethe, izivakashi European ikakhulukazi kukuyo.
Eduze ehhotela kukhona eziningana Izitolo nge amanani kahle eliphezulu. Nasi eminye ku iyona eziyinkimbinkimbi ezine storey nge imikhiqizo emihle kanye namanani. Tunisia wanquma behlise, kodwa izimakethe noma izitolo yangasese. Ngezinsuku zemikhosi ethile ehhotela kuza umuntu, ubani ongathenga eziyisikhumbuzo ezishibhile kanye nezinye izinto ezincane.
Imali kungashintshwa edilini lomshado. Inkambo ungcono ngisho nangaphezu kwanoma esenana.
Ihhotela Ungasebenzisa amasevisi photographer and uthole isithombe session okukhulu. Izithombe kuyabiza, ushibhile ukuthenga disc nge izithombe.
Kulabo ujabulele ukuphumula okuhle, kodwa akulungele yokuyikhokhela imali eningi, kuzoba i ekahle beach resort of Sousse, Tunisia. ClubHotel Riu Bellevue Park - a eziyinkimbinkimbi ehhotela nge izici eziningi. It has konke okudingayo ukuhlala okuphumuzayo. A elikhulu yokubhukuda nge endaweni yezingane, ezihlukahlukene okumnandi ukudla, ebhishi yangasese, indawo enhle - konke unezela ngemisebenzi emihle. izivakashi eziningi akhononde ukuthi Tunisia akuyona sengqondo esihle kakhulu Russian. Kodwa-ke neze mayelana ehhotela ClubHotel Riu Bellevue Park. abasebenzi Izibuyekezo ukukhombisa izinga eliphezulu lokutholakala kwe-. Izivakashi singaqiniseka ukuthi ethokomele futhi zikhululekile.
Into kuphela ezingase zithathe isikhathi lonke - akusiwona ulwandle esicacile. Kodwa-ke wonkhe umuntfu kweyeme etinyatselweni isikhathi sokuhlala. Ezinsukwini ashisayo ikakhulukazi ungakwazi uzizwa iphunga ezingemnandi abolile izimila zasolwandle. Okwamanje, ezikhuthele amabhishi ahlanzekile, kungaba umqondo omuhle ukuba uchithe isikhathi ngasechibini noma hambo. Abaqondisi Local bayokujabulela ukukutshela ngazo zonke ezibalulekile ezikhangayo Tunisia. Futhi izipho ezihlotsheni nakubangane zingathengwa, ngisho ngaphandle kokushiya ehhotela.
Ngesitimu: ukubuyekezwa, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka. Yamalahle: Ukubuyekeza imifanekiso, amanani